FEIT oo Fahad ka reebtay liiska Xidhibaannada cusub | KEYDMEDIA ENGLISH
FEIT oo Fahad ka reebtay liiska Xidhibaannada cusub
Fahad Yaasiin, wuxuu saacadihii la soo dhaafay dadaal badan ku bixiyay inuu kala jabiyo Guddiga doorashooyinka, si dib loogu dhigo shaacinta liiska xildhibaannada dooran, hayeeshee, Guddoomiyaha iyo xubno kale ayaa si adag uga hor yimid damaca Fahad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT iyo Xoghayayaasha Golayaasha Baarlamaanka, ayaa shaaciyay natiijada doorashada kuraasta Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee ilaa hadda la doortay.
Fahad Yaasiin, oo Baladweyne, ku soo boobay kursiga HOP086 ayaa laga reebay liiska caawa la shaaciyay, halka ay ka maqan yihiin saddex kursi oo ka yimid maamul goboleedka Koofur galbeed, kuwaas oo hore loo hakiyay doorashadooda.
Kuraasta natiijadooda la diiday waxaa ka mid ah, HOP103, oo Baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Guddooomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamaed Sheekh Cismaan Jawaari, kaasoo Baydhabo loogu boobay Maxamed Cali Xasan.
Kursiga HOP154, oo loo boobay Sareeda Maxamed Cabdalla, guddiga doorashadu waxa ay hore u sheegeen in hannaankii loo maray doorashadiisa aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada, maadaama ay u tartay gabar ka yar 25 sano.
Kursiga kale, ee natiijadiisa la diiday waa HOP204, kaas oo loo dhacay Isaaq Cali Subag, waxaana doorashdiisa loo hakiyay kadib markii Laftagareen diiday inuu tartanka kursigas ka qeyb galo Wasiirka Gaashaandhiga Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac).
Guddiga Doorashooyinka Heer Federal (FIET), ayaa hore dhamaan boobkii kuraastaan wax kama jiraan ka soo qaaday, halka Guddiga Maamulka Doorashooyinka Koonfur Galbeed, ay dhankooda hore u sheegeen in ay ansax tahay dorashada sadexda kursi.
Tirada hore u soo baxday xildhibaannada Golaha shacabka, waxa ay ahayd 249 kursi oo 51 dumar yihiin, hayeeshee, afarta kursi oo la reebay ayaa tirada ka dhigeysa 245 kursi oo 50 dumar yihiin, taasoo ka dhigan ay baaqi noqoneyso doorashada 30 kursi.